घमण्डले चिसिएको सम्बन्ध पशुपति र राधिकाको सम्बन्ध (रिपोट सहित) – Himal FM 90.2 MHz
घमण्डले चिसिएको सम्बन्ध पशुपति र राधिकाको सम्बन्ध (रिपोट सहित)
कला र साहित्य Author July 30, 2016
शिखर गजरकोटे, सोलुखुम्बु । एक समय पशुपति शर्मा र राधिका हमालले गाएको तिज गीतले धेरैको मन जितेको थियो । टलक्कै ऐना टल्कियो, लरक्कै लक्यो रातो साडी भुईमा, क्या राम्रो नाच्छे मोराले जस्ता सफल तिज गीतमा संयुक्त स्वर दिएर चर्चा बटुलेका उनीहरुले संगै गाएको गीत नसुनिएको बर्षौ भएको छ । सम्बन्ध चिसिनुको कारण के रैछ ?
तिजका गीतमा खुव रुचाईएका पशुपति शर्मा र राधिका हमाल आज भोली आ–आफ्ना बाटोमा हिडेका छन् । एक समय पशुपति शर्मा सृजना गर्थे, राधिका हमाल र शर्माले गाउथे । बजारमा उनीहरुको स्वर रहेको गीतको चर्चा हुन्थ्यो । तर आज भोली शर्मा र हमालको सम्बन्ध चिसिएको छ । स्रोताले उनीहरुको संयुक्त स्वर सुन्न चाहेपनि पाईरहेका छैन् । सम्बन्ध विग्रनुको खास कारण के हो ? पशुपति शर्मा हेर न ओई बाटुली गीतवाट सम्बन्ध विग्रिएको बताउछन् । सो गीत राधिकाले गाउन चाहन्थिन तर देवीले गाएपछि खटपट भएको पशुपतिको भनाई छ ।
पशुपति राधिकासंगको सहकार्य एक प्रतिशत मात्र बाँकी रहेको बताउछन् । तर राधिका हमाल लेनदेनमा कुरा नमिलेपछि सम्बन्धमा चिसोपना आएको तर्क गर्छिन् । गीतमा सहकार्य नभएपनि स्टेज कार्यक्रममा भने कहिलेकाहि संगै प्रस्तुती दिने गरेका छन् ।
उनीहरु एक आपसमा टाढिएपछि पशुपति शर्माले नयाँ गायिकालाई ढाडस लिईरहेका छन् । भने राधिकाले पनि नयाँ गायकहरुसंग बढि गीत रेकर्ड गराईरहेका छन् । राधिका भन्दा पशुपति सृजनामा धेरै अघि मानिन्छन् तर राधिका पनि महिला कलाकार सृजनामा अल्छि देखिएका बेला आफ्नो नामवाट बजारमा आउने गीत आँफै सृजना गर्दै आएकी छिन् । पशुपति शर्माले यो बर्ष तिजमा १३ वटा गीत सृजना गरेपनि १२ वटा गीतमा नयाँ गायिका संग स्वर मिलाए भने राधिकाले आँफ्नै सृजनामा तिजको कोशेली कहाँ गईन राधिका बजारमा ल्याएकी छिन् । उनले २२ वटा तिज लक्षित गीतमा स्वर दिएको बताउछिन् ।